England Oo Awood Ugu Soo Baxday Semi-finalka Euro 2020, Ukraine Ayay Xasuuqeen - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaEngland Oo Awood Ugu Soo Baxday Semi-finalka Euro 2020, Ukraine Ayay Xasuuqeen
England Oo Awood Ugu Soo Baxday Semi-finalka Euro 2020, Ukraine Ayay Xasuuqeen
July 3, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 1
Xulka Ingariiska ayaa u soo baxay semi-finalka Koobka Qaramada Yurub ka dib markii ay guul weyn ka gaareen xulka Ukraine oo ay wareega sideed dhamaadka isku arkeen ciyaar xiiso laheyd oo ka dhacday Stadio Olimpico ee magaalada Roma
England ayaa semi-finalka waxay Wembley kula ciyaari doonaan xulka Denmark oo iyagana ka soo gudbay Czech Republic.
Waqti dheer kuma aysan qaadanin xulka Ingariiska inay hogaanka u qabtaan ciyaarta iyadoo daqiiqadii afaraad uu shabaqa soo taabtay weeraryahan Harry Kane ka dib kubad uu ka soo shaqeeyay Raheem Sterling.
Ukraine ayaa bartamihii qeybta hore cadaadis xoogan saartay England laakiin waxaa lagu kala nastay iyadoo England ay 1-0 ku hogaamineyso ciyaarta.
Daqiiqad markii ay socotay qeybta labaad ayay England heshay goolkeedii labaad markii laad xor ah uu soo qaaday Luke Shaw uu madax ku dhaliyay daafaca Harry Maguire.
Daqiiqadii 50aad Harry Kane ayaa madax ku dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta ahaana goolkii seddexaad ee xulka England. Luke Shaw ayaa karoos kale oo macaan soo qaaday iyadoo Kane uu madax kubada ku dabamariyay goolhayaha.
Xasuuqa England halkaas kuma joogsanin iyadoo Jordan Henderson uu goolkiisii ugu horeysay abid u dhaliyay xulka England isagoo madax ku dhaliyay kubad koorno aheyd uu soo qaaday Mason Mount daqiiqadii 63aad.
England ayaa semi-finalka Euro 2020 soo gaartay iyadoo aan wax gool ah laga dhalinin shantii kulan ee ay soo ciyaareen, waxayna habeenka Arbacada Wembley kula balansan yihiin xulka kale ee wacdaraha dhigaya ee Denmark.
Waa markii labaad taariikhda Ingariiska ee ay dhaliyaan afar gool kulan Qaramada Yurub ama Koob Adduun ah tan iyo markii ay ku guuleysteen Koobka Adduunka sannadkii 1966 markaasoo ay 4-2 kaga badisay xulka Jarmalka ciyaartii finalka.